Mafuta Kuzadza Mafuta - Micvd.com
Ichi chigadzirwa chekuzadza mafuta chinonyanya kubatsira kuzadza mafuta mumabhodhoro epurasitiki, mabhodhoro egirazi uye kunyangwe midziyo yesimbi. Izvo zvinoshandiswa nemichina yakadai yekuzadza mafuta zvinosanganisira kugona kuzadza mhando dzakawanda dzemafuta, semuchina wekuzadza mafuta emichero, muchina unonwa mafuta ekuzadza, muchina wekuzadza mafuta, muchina wekuzadza mafuta. Pamusoro pekuti muchina uyu une zvakati wandei zvakanaka zvinosanganisira isina chinhu chekudonha uye kugona kugadzirisa pane izvo zvinobhururuka. Ndiwo muchina unoshanda kwazvo nekuita kwakanaka usingabhadhare mari yakawanda kuti uchengetedzeke.
Muchina wedu wekuzadza Mafuta ekubikisa, Eeli Oiri, Mafuta Akasvinwa, Mafuta, Tsitsi Mafuta, Kushambidza Maoko, Mafuta Akacheneswa, Mafuta eRoundnut, Mafuta Einjini, Mafuta Mafuta, Mafuta, Mafuta eOrning Mafuta anozadza neYazadza Misoro Kusvikira 16 Nozzle etcOur muchina wekuzadza mafuta Mushandisi ane ushamwari PLC inodzora ne touch screen HMI neImunhu akazadza musoro kudzora kwakanyatso kodzera akawanda maindasitiri Mitezo yakakodzera seMuchina weEdible mafuta ekuzadza, muchina wakanatswa wekuzadza mafuta, mashini emafuta ekuzadza mafuta, mushonga wekubika mafuta, muchina wekuzadza mafuta, Mafuta ekuzadza mafuta muchina, muchina wekuzadza mafuta, HDPE inogona kuzadza muchina, unokwanisa kuzadza muchina, Jerry anogona kuzadza muchina, muchina wekuzadza mafuta emichero, muchina wekuzadza mafuta, makina ekuzadza mafuta emafuta, injini yekuzadza mafuta enjini, yemafuta mafuta filler, giya remafuta muchina wekuzadza, mafuta ekuzora, mafuta ekuzadza oiri, muchina wekuzadza mafuta, girazi rekupomba mafirita, inoyerera metres filler, Iyi nzira inobvumira mafirita edu kuwana +/- 0.5% kurongeka uye kudzokorora.
Otomatiki Olive Mafuta Kuzadza Machine
Autoamtic Olive Oiri Yokuzadza Mafuta Mhando ndiyo piston mhando, iyo chaiyo yekuzadza ndeye 0.5%, iyo yekuzadza vhoriyamu kubva ku100ml-5000ml uye isu tinogona kugadzira Kuzadza nozzle kubva 2 nozzles kusvika 16nozzles PLC Controls, kubata skrini, zvikamu zvegiredhi yekudyidzana, simbi isina tsvina uye anodized aluminium kuvaka, pamwe zvakawanda zvimwe zvinhu zvinouya yakajairwa. bhodhoro reoiri rizere
NPACK Automatic Olive Oiri Yokuzadza Mafuta yakarongedzwa kuti iwedzere kuita zvakanaka kune chero mutsetse wekugadzira unoshandiswa mu cosmetic, indasitiri yezvikafu, makemikari zvine hunyanzvi, maindasitiri eOfuta. Ichi Dhizaini ndiyo mhando wepistoni, unobva wangozadza iyo Mafuta ekubikisa, mafuta omuorivhi, mota mafuta mubhodhoro. ukuru hwekuzadza ndi100ml-1000ml uye1000ml-5000ml. Kuendeswa kwechigadzirwa kubva kune yako yakawanda tangi kuenda kumapistoni kunogona kurongedzwa neye buffer tangi uchishandisa danho-inonzwa kuhukura, manifold neakananga dhizaini, kana nzira yekudzokorora.
1. 304 Stainless simbi rinorema basa simbi isina simbi yakasungwa C furemu.
2. Zvese zvikamu zvekusangana ndeasina simbi, hutsanana, Teflon, Viton uye hoses pane zvako zvaunoda.
3. Yakakwana yekuzadza vhoriyamu, mukati me ± 0.5% uye yakazara bhodhoro counter.
4. Hapana bhodhoro risina kuzadza, PLC kutonga
5. Midziyo yekudonha yezasi kumusoro kuzadza zvinhu zvinopupa furo
mhando NP-VF otomatiki Olive Mafuta Ekuzadza Mafuta
Kuzadza ivhu 100ml-1000ml uye 1000ml-5000ml
Kuzadza Type Pisitoni Rudzi
Kuzadza Mhepo 2000bottle / awa (Sezvo pa6 nozzle ye1000ml)
Kuzadza Kwazvo 0.5%
simba 380V 50HZ / 60HZ 1.5KW
Mhepo Compressor 0.6-0.8Mpa
divi 1800mm 900mm * * 2200mm
Inokodzera Kubika / lube / motor / olive / yemiriwo / injini yemafuta / mafuta ezuva
Linear mhando inogadziriswa yemhando dzakawanda dzakasiyana dzemabhodhoro
Zviri nyore kuchengetedza, hapana midziyo inokosha inodiwa.
Hapana bhodhoro, kwete kuzadza, zvinonongedza PLC control
Yakavharwa Kuzadza mazizi is anti madonhwe, silika, uye auto akacheka viscous mvura
Yakakwana yekuzadza vhoriyamu, mukati me ± 0.5-1% uye yakazara bhodhoro counter.
Zvisimbiso zvakakosha kana hoses zvinogadziriswa kana mvura yakasvibisa.
Kudhiza magaro ezviziso zvekuzadza kumusoro zvigadzirwa zvinoputisa kana zvichida Bhoturu muromo unogona kuwanikwa.
Otomatiki Zvinodyiwa & Kubika Oiri Kuzadza Mashini
Isu tiri kutungamira kugadzira uye mutengesi weA automatic Injini Yekuzadza Mafuta Mashini. Inopihwa mhando yemuchina unogadzirwa nekushandisa zvakanakisa zvigadzirwa zvekugadzira mbesa nekusimudzira tekinoroji kuti igadzirise zvinodiwa nevatengi vedu kubva kuindasitiri yemafuta yakazara. Isu tinopa yedu Mafuta Packaging Machine pamutengo wakanaka mumushini.
Kambani yedu yakawana zita nemukurumbira mukupa Kubika Mafuta Kuzadza Mafuta kune vatengi. Mafuta Kuzadza Mafuta zvinoreva kune anozadza zvinwiwa nehukuru hwechigadzirwa, kuyerwa neye flowmeter. Iko kumhanyisa kwekuzadza kunosiyana sehoriyumu yekuzadzwa sezvo muchina wacho une zvishongedzo zvepasi zvekuzadza musangano uye inoshandurwa vhoriyamu kutonga. Isu tinogadzira michina iyi tichishandisa zviyero zvemhando yepamusoro seyero. Iyo inoshongedzwa zvakanaka neyakagadziriswa vhoriyamu kutonga uye pasi-kumusoro yekuzadza musangano uye kumhanya kwekuzadza kunosiyana nehuwandu. Uyu muchina wekuzadza unoshanda pane nhepfenyuro volumetric nheyo kuburikidza neCC inodzorwa neyekuyerera metres.
304 Sirivha isina kusimba basa rinorema simbi isina tsvina yakavezwa C frame.
Zvese zvekubatana zvikamu zvine simbi isina tsvina, hutsanana, Teflon, Viton uye hoses pane zvako zvaunoda.
Yakarurama kuzadza ivhu, mukati me ± 0.5% uye yose yekamboro yekabhokisi.
Hapana bhodhoro risina kuzadza, PLC control
Dhizai mazai pasi pasi mukuzadza mishonga inopupuma
mhando NP-VF otomatiki Muto Wokuzadza Mafuta Mashizha
1 Linear mhando inogadziriswa yemhando dzakawanda dzakasiyana dzemabhodhoro
2 Nyore kuchengetedza, hapana akakosha maturusi anodikanwa.
3 Hapana bhodhoro, hapana kuzadza, otomatiki PLC kutonga
4 Yakavharirwa Kuzadza nozzles ndeye anti madonhwe, silika, uye auto akacheka viscous mvura
5 Yakakwana yekuzadza vhoriyamu, mukati me± 0.5-1% uye yakazara bhodhoro inopikisa.
6 Zvisimbiso kana hoses zvakasarudzika zvinogadziriswa kana mvura yacho ikaora.
7 Kutyaira nemazizi ezasi ekuzadza zvigadzirwa zvehupamhi kana ichida Bhodhoro muromo inogona kuwanikwa.
Otomatiki mota & Injini Kuzadza Machine
Autoamtic mota / enjini yekuzadza mafuta muchina ndiyo piston mhando, iyo chaiyo yekuzadza ndeye 0.5%, huwandu hwekuzadza kubva pa100ml-5000ml uye isu tinogona kugadzira Kuzadza machena kubva 2 nozzles kusvika 16 nozzles PLC Controls, kubata-skrini, chikamu chegiredhi yekusangana simbi uye anodized aluminium kuvaka, pamwe zvakawanda zvimwe zvinhu zvinouya yakajairwa.
NPACK Auto otomatiki / Injini Yekuzadza Mafuta Mashini yakagadzirirwa kuwedzera kushanda kune chero mutsetse wekugadzira unoshandiswa mu cosmetic, indasitiri yekudya, makemikari zvine hunyanzvi, maindasitiri emafuta, uye maindasitiri emafuta. Ichi Dhizaini ndiyo mhando wepistoni, unozvizadza wakazara lube, mafuta emafuta, mafuta einjini muhombodo. ukuru hwekuzadza ndi 10ml-5000ml. Kuendeswa kwechigadzirwa kubva kune yako yakawanda tangi kuenda kumapistoni kunogona kurongedzwa neye buffer tangi uchishandisa danho-inonzwa kuhukura, manifold neakananga dhizaini, kana nzira yekudzokorora.
Inotendera kukurumidza kumhanyisa uye kwakanyanya kuita basa.
Otomatiki volumetric piston pombi yekuzadza rutsigiro.
Ipa kuzadza neakanyanya usahihi.
Yepamberi PLC yekudzora system uye frequency control yekuita chaiyo kushanda.
Hapana bhodhoro hapana rekuzadza rutsigiro.
Inobvumira kuiswa kwakaringana kwekuzadza huwandu.
mhando NP-VF otomatiki Mafuta Kuzadza Mafuta Mashini
Inokodzera Kubika / lube / motor / olive / yemiriwo / injini yemafuta
Isingabvumirane nemagetsi sensor kuona kuti "hapana bhodhoro hapana zadza" system.
Mitsubishi ita PLC system neT "Kubata skrini uye VFD kutonga kweiyo conveyor kumhanya kutonga
Kamuri yekuyera yeGerman yekudzokorora zviri nani ye0.05%